Nidaamka Caddaalada Soomaaliya oo meel xun maraya | KEYDMEDIA ONLINE
Nidaamka caddaaladeed ee dalka ayaa maalinba maalinta ka danbeysa sii liidanaya, taasoo ay walaac ka muujinayaan bulshada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Heerar kala duwan ayuu soo maray nidaamka caddaaladeed ee Soomaaliya, waxaase uu iminka taagan yahay meel aad u liidata oo dadka quus ka joogaan.
Dhibanayaasha caddaalad ayaa lagu xujeeyaa dhaqaale, waxaana mar walba guusha xukunka leh qofka jeebka buuran, iyadoo ay meesha ka maqan tahay sinnaan iyo dhex-dhexaadnimo.
Nidaamka caddaalada dalka ayaa marka laga yimaado dowladda, waxaa sidoo kale dagaal kula jira odayaasha dhaqanka, kuwaasoo isticmaala xeer jajab, iskuna daya in ay fara-galiyaan kiis kasta, geeyana geedka hoostiisa, halkaasoo diyo lagu kala qaato, waana dhaqan soo jireen ah, oo denbiilaha dhiira galinaya.
Nidaamka caddaaladeed oo liita ayaa kumaannaan Soomaali ah ku xanbaaray in ay garsoor u doontaan, Maxkamadaha Kooxda Al Shabaab, ay ku leeyihiin meelo ka mid ah koonfurta, waana arrin walaaceeda leh.
Magaalada Qaahira ee Caasimadda Masar ayaa waxaa todobaadkan ka furmay shir looga hadlayo arrimaha caddaalada, iyadoo Soomaaliya uu uga qeyb galayo, Wasiirka caddaalada Cabdiqaadir Maxamed, waxaana ka qeyb galkiisa kulanka lagu macneynayaa mid aan waxba soo kordhineyn, oo ay dowladda waqtigeedu dhamaaday ku dooneyso in ay ku soo qaadato dhaqaale hor leh, iyadoo ka been sheegeysa in ay ku hagaajineyso nidaamka caddaalada dalka.
Shacabka ayaa wal wal lixaad leh ka qaaday dhabaha la mariyey kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd nabad sugida, oo dilkeeda lagu eedeeyey hay'addii ay u shaqeyneysay.
Si kastaba shacabka Soomaalida, oo u muuqda kuwa aan marxalada dalka ka quusan, ayaa ku sheegaya markaad la shekeysato in dharaar un ay is baddeleyso hannaanka caddaaladeed ee dalka, waana kuwa rajo ku nool, wallow aysan muuqan ififaalaha rajada ay naawilayaan.